18 Jehovha akazozviratidza+ kwaari pamiti mikuru yeMamre,+ paakanga akagara pasuo retende pakwainge kwava kupisa mukati mezuva.+ 2 Paakasimudza maziso ake,+ akabva atarira uye nechekoko varume vatatu vakanga vakamira kure naye. Paakavaona akatanga kumhanya achibva pasuo retende kuti avachingure, akakotama.+ 3 Akabva ati: “Jehovha, kana zvino mandinzwira nyasha, ndapota musapfuura pamushumiri wenyu.+ 4 Ndapota, mvura shomanana ngaitorwe, mugeze tsoka dzenyu.+ Ibvai matsenhama pasi pomuti.+ 5 Regai nditore chimedu chechingwa, musimbise mwoyo yenyu.+ Zvadaro, mungapfuura henyu, nokuti ndokusaka mapfuura nepano pamushumiri wenyu.” Ivo vakati: “Zvakanaka. Ungaita sezvawataura.” 6 Naizvozvo Abrahamu akakurumidza kuenda kutende kwaiva naSara akati: “Kurumidza! Tora maseya matatu efurawa yakatsetseka, kanya mukanyiwa uite makeke eraundi.”+ 7 Abrahamu akabva amhanyira kuboka rezvipfuwo, akatora nzombe duku yakanaka ine nyama yakapfava akaipa mushandi, akakurumidza kuigadzira.+ 8 Akabva atora ruomba nomukaka nenzombe duku yaakanga agadzira akazviisa pamberi pavo.+ Iye akaramba akamira pedyo navo pasi pomuti zvavakanga vachidya.+ 9 Zvino vakati kwaari: “Mudzimai wako Sara ari kupi?”+ Iye akati: “Mutende umo!”+ 10 Naizvozvo iye akati: “Chokwadi ndichadzoka kwauri gore rinouya panguva ino, uye, tarira! Sara mudzimai wako achava nomwanakomana.”+ Zvino Sara akanga achiteerera ari pasuo retende, raiva shure kwomurume wacho. 11 Abrahamu naSara vakanga vakwegura, vava nemakore mazhinji.+ Sara akanga aguma kuenda kumwedzi.+ 12 Nokudaro Sara akasekera mumwoyo,+ achiti: “Chokwadi ndichazvifarira here, zvandachembera kudai, uye ishe wangu zvaakwegura?”+ 13 Jehovha akabva ati kuna Abrahamu: “Nei Sara aseka, achiti, ‘Chokwadi zvandachembera kudai, ndichabereka mwana here?’+ 14 Pane chinhu chipi nechipi chakanyanya kuomera Jehovha here?+ Panguva yakatarwa ndichadzoka kwauri, gore rinouya panguva ino, uye Sara achava nomwanakomana.” 15 Asi Sara akatanga kuramba, achiti: “Handina kuseka!” Nokuti akanga achitya. Iye akati: “Aiwa! waseka.”+ 16 Gare gare varume vacho vakasimuka ipapo vakatarira zasi nechokuSodhoma,+ uye Abrahamu akanga achifamba navo kuti avaperekedze.+ 17 Jehovha akati: “Ndiri kuramba ndakavanzira Abrahamu zvandiri kuita here?+ 18 Chokwadi, Abrahamu achava rudzi rukuru uye rune simba, uye marudzi ose epanyika achazvikomborera nokwaari.+ 19 Nokuti ndava kuzivana naye kuitira kuti arayire vanakomana vake neimba yake inomutevera kuti vachengete nzira yaJehovha kuti vaite zvakarurama nezvakatongwa;+ kuti Jehovha aitire Abrahamu zvaakataura nezvake.”+ 20 Naizvozvo Jehovha akati: “Kuchema kwokunyunyuta pamusoro peSodhoma neGomora+ chokwadi kukuru, uye chivi chavo chokwadi chikuru kwazvo.+ 21 Ndakatsunga kwazvo kuburuka kuti ndione kana vachiita maererano nokuchema kunoitwa pairi uko kwasvika kwandiri, uye, kana zvisizvo, ndigozviziva.”+ 22 Panguva iyi varume vacho vakabva ipapo vakaenda kuSodhoma; asi Jehovha,+ akanga achakamira pamberi paAbrahamu.+ 23 Abrahamu akabva aswedera akati: “Chokwadi muchaparadza vakarurama nevakaipa here?+ 24 Ngatitii muguta racho mune vanhu vakarurama makumi mashanu. Muchavaparadza mukasaregerera nzvimbo yacho nokuda kwevakarurama makumi mashanu vari mukati maro here?+ 25 Hamungambofungi kuita saizvozvi, kuuraya munhu akarurama pamwe chete neakaipa kuti akarurama aitirwe zvinoitirwa akaipa!+ Hamungambofungi zvakadaro.+ Mutongi wenyika yose haasi kuzoita zvakarurama here?”+ 26 Jehovha akabva ati: “Kana ndikawana muSodhoma vanhu vakarurama makumi mashanu muguta racho, ndicharegerera nzvimbo yacho yose nokuda kwavo.”+ 27 Asi Abrahamu akapindura kuti: “Ndapota, tarirai ndatsunga kutaura naJehovha, nepo ndiri guruva nemadota.+ 28 Ngatitii vashanu vashayikwa pavakarurama makumi mashanu. Mungaparadza guta rose nokuda kwevashanu here?” Iye akati: “Handingariparadzi kana ndikawana imomo makumi mana nevashanu.”+ 29 Asi akataurazve naye akati: “Ngatitii makumi mana vawanikwa imomo.” Iye akatiwo: “Handingazviiti nokuda kwevane makumi mana.” 30 Asi iye akati: “Ndapota, Jehovha ngaarege kutsamwa kwazvo,+ asi regai ndirambe ndichitaura:+ Ngatitii makumi matatu vawanikwa imomo.” Iye akatiwo: “Handingazviiti kana ndikawana makumi matatu imomo.” 31 Asi iye akati: “Ndapota, tarirai ndatsunga kutaura naJehovha:+ Ngatitii makumi maviri vawanikwa imomo.” Iye akatiwo: “Handingariparadzi nokuda kwevane makumi maviri.”+ 32 Akazoti: “Ndapota, Jehovha ngaarege kutsamwa kwazvo,+ asi regai nditaure kamwe chete aka:+ Ngatitii gumi vawanikwa imomo.” Iye akatiwo: “Handingariparadzi nokuda kwevane gumi.”+ 33 Jehovha+ akabva aenda paakanga apedza kutaura naAbrahamu, Abrahamu akadzokera kunzvimbo yake.